RASMI: Xiddiga ku guuleystay Abaal-marinta laacibka bisha November ugu fiicnaa horyaalka Talyaaiga ee Serie A oo la shaaciyey %
By Badrudiin Mohamed	 On Nov 30, 2019
Waxaa la shaaciyey ciyaaryahanka ku guuleystay abaal-marinta laacibka bisha November ugu fiicnaa horyaalka Talyaaniga ee Serie A.
Laacibka khadka dhexe ee kooxda Cagliari, Radja Nainggolan ayaa loo magacaabay inuu ku guuleystay abaal-marinta ciyaaryahankii ugu fiicnaa horyaalka Serie A bishan maanta ku eg ee November.
Nainggolan ayaa horraantii isbuucaan sheegay inuu doonayo inuu caddeeyo in go’aankii Inter uu ahaa mid qaldan, maadaama ay amaah ku dirtay Nerazzurri, waxaana haatan lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay abaal-marinta MVP ee bisha November.
“Radja Nainggolan waa mid ka mid ah xiddigaha khadka dhexe ee ugu fiican oo aan ku haysanno horyaalkeenna” ayuu yiri Madaxa guud ee Serie A, Luigi De Siervo.
“Waxa uu dib u helay qaab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa Cagliari, isaga oo kaashanaya asxaabtiisa kooxda, wuxuu ku kor qaaday kooxda meel u dhow hoggaanka Serie A, waxaana ammaanaya warbaahinta iyo taageerayaasha”
“Saddexdii kulan ee ugu dambeeyay, Nainggolan marka laga soo tago tayadiisa, wuxuu dhaliyay labo gool oo ka yimid bannaanka diilinta ganaaxa, waxaana uu bixiyay saddex caawin oo muhiim ah.” ayuu hadalkiisa ku daray Luigi De Siervo.
Cagliari ayaa haatan fadhisa kaalinta afaraad ee kala horreynta horyaalka Serie A, waana meel ay uga qalmaan inay ka helaan booskooda Champions League xilli ciyaareedka soo socda kaddib markii ay uruursadeen 25-dhibcood kaliya 13 kulan oo ay ciyaareen horyaalka.
RASMI: Arsenal oo ku dhawaaqday inay shaqada ka ceyrisay Macalin Unai Emery